Na-eto eto n'ọzara? Ọ bụghị echiche nzuzu, ọ bụ ihe a na-eme ugbua | Netwọk Mgbasa Ozi
Claudi ego | | Nkewa, Meteorology
Ala akọrọ, nke nwere ntakịrị mmiri-ozuzo, nkụ ... Ọ bụghị ihe a na-ejikọkarị ya na ahịhịa, na-anaghị ekwu maka conreos. Ma ee, ọ bụ omume n'ezie, nke a na-eme, na ihe a na-ahụkarị karịa priori ọ nwere ike iyi. A na-egosiputa ịkọpụta ihe n'ọzara ọtụtụ ugboro, dị ka ihe ọzọ iji nye ọnụ ọgụgụ bi na ala ọzara. Na mgbakwunye, a na-eji ume ọhụrụ eme ya, yabụ belata mmetọ mmetọ kachasị.
Site Jiri iru mmiri mee ihe, njem ụgbọ mmiri na ọbụna mmiri mmiri. Otu n’ime ihe kacha nso a ka achọtara na Qatar, akpọrọ ya “Sahara Forest Project”.
1 Ọrụ Sahara ọhịa
1.1 Nrọ mezuru
2 Ndi Sekem kwadoro
Ọrụ Sahara ọhịa
Ihe oru ngo a na-agbasorita n’inweta uru nke otu n’ime otutu uzo di na Qatar, okpomoku. Facilitieslọ ọrụ ahụ nwere ya na igwe osisi ike ike. Site na nke a, ha ga-enweta ihe mbụ, tọghata okpomọkụ ka uzuoku. Mgbe, site na turbines na ndị na-enye ọkụ, ọ na-agbanwe ka ọ bụrụ ọkụ eletrik. Yabụ, enwere ike ịba mmiri mmiri ma jiri ya mee ka griin haus dị jụụ.
con a na-ejigharị mmiri dị mma, nke na-esi na mkpofu sitere na griin haus maka ịkụ osisi nke dị n'èzí. Ogige ndị a kụrụ n'ụzọ dị mma n'èzí na-enyekwa aka ịza mmiri ọ bụla karịrị akarị, si otú a na-emepụta mmiri mmiri dị jụụ ma dị jụụ dị mkpa maka osisi site n'enyemaka nke ifufe.
Ọ bụ nnukwu ọchịchọ na ihe pụrụ iche, na ọtụtụ n'ime ndị ọrụ ngo ahụ nọ n'etiti ịnụ ọkụ n'obi na obi abụọ banyere ma ha ga-emecha nweta ebumnuche ha. Ọ malitere ọrụ a afọ ole na ole gara aga, na taa ọ na-emejuputa nke ọma ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Neil Crumpton, onye bụ onye isi na onye isi ala nke Planet Hydrogen, mesiri obi ike na ọrụ a nwere ike ịgbanwe ihe. «Nsogbu ndị kachasị mkpa taa bụ mgbanwe ihu igwe na mmiri gburugburu ụwa Teknụzụ ndị a dị mfe nwere ike idozi nsogbu abụọ ahụ. Enweghị m ike ịkwụsị ma na-eche na nke a bụ ọhụụ na ọ bụghị mirage.
Ekwesiri itinye ya na Qatar, ya na oke ike ike ya, na-achịkwa ịgbanwe n'ụzọ a na-ahụtụbeghị mbụ. Ndị ọkachamara ndị ọzọ, n'aka nke ọzọ, ejighị n'aka ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ezie ụzọ ziri ezi ịme ihe. Nkwado ego nke ụlọ ọrụ naanị efu nde dolla 5. Patrick González, ọkà mmụta gburugburu ebe obibi onye ya na Mahadum California rụkọrọ ọrụ na Berkeley, siri ike maka ya. Site n’otu isi obodo ahụ, ị ​​nwere ike weghachite usoro okike na inyere ndị mmadụ aka nke ọma site na njikwa obodo nke ihe okike. '
Ndi Sekem kwadoro
Sekem na-arụkọ ọrụ ubi
Afọ iri anọ gara aga, Ibrahim Abouleish, hiwere otu nkwado ndị Egypt na ndịda Cairo, Sekem. Ibrahim, onye jidere Onyinye Nobel Nobel na 2003, chọrọ ka ọ dịrị tupu oge ya. Ya onwe ya mesiri ya ike na mkparita uka a welitere dika "Centurydị narị afọ nke XNUMX nke ọganiihu azụmaahịa na mmepe mmekọrịta mmadụ na ọdịbendị nke ọha mmadụ jikọtara ọnụ site na akụ na ụba ịhụnanya." Nke a bụ ihe ịga nke ọma na, site n'iji ya tụnyere, mgbe Projectlọ Ọrụ Sahara malitere, Sekem nwere ụlọ ọrụ asaa na ndị ọrụ nke ndị ọrụ 2.000.
Sekem taa na-emepụta nri a na-edozi ahụ, ha na-emepụta ngwaahịa ahụike na akwa. N'etiti ụlọ ọrụ niile dị n'okpuru ebe obibi na njiri mara mma nke ngwaahịa ha, anyị na-ahụ ụfọdụ ọ dị ka ọ dị iche na ọrụ ubi dị ọcha. Atos, nke bụ aha onye raara onwe ya nye ịmepụta ọgwụ maka ahụike, gụnyere ngwaahịa megide ọrịa kansa. Sekem na mgbakwunye inwe ụlọ akwụkwọ nke ya maka ndị ọrụ, malitere ulo oru mahadum. Ezigbo ihe atụ nke nrọ Ibrahim na-agbaso.
Anyị nwekwara ike ịchọta ihe atụ ndị ọzọ na mba ndị ọzọ, dị ka Libya, ma ọ bụ ụfọdụ ndị na-aghọ ndị ọzọ na-eduga na mpaghara ahụ, dịka Israel. Ma ị makwaara na megide mgbanwe ihu igwe, e nwere usoro ọrụ ugbo ndị ọzọ, dị ka, Ọrụ Ugbo?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Na-eto n'ọzara? Ọ bụghị echiche nzuzu, ọ bụ ihe a na-eme ugbu a
Ihu igwe na-ekere òkè na mkpebi na ọdịda nke Alaeze Ukwu Rom